Fampisehoana Kindle, endrika inona no vakin'ny Kindle? Jereo! | Ireo mpamaky rehetra
Joaquin Garcia | | Amazon Kindle, eBooks, mpamaky
Ny e-book dia rakitra nomerika misy boky na lohateny famoahana. Matetika izy io dia antsoina hoe ebook, anarana avy amin'ny teny anglisy boky elektronika. Tamin'ny voalohany, ireo fitaovana mahay mamaky boky elektronika dia nanjary nifangaro tamin'ny voambolana ebook ary raha ampiantsika amin'io ny avalanche ny fanafohezana manodidina ny endrika ebook dia miharihary ny fisavoritahana. Amin'izao fotoana izao dia vitsy ny olona mahalala tsara cizay ny endrika mifanaraka amin'ny Kindle, mpamaky e-boky izay heverin'ny maro ho eReader tsara indrindra.
Tsy ny mpamaky e-book rehetra no mahay mamaky endrika mitovyRaha ny mahazatra dia matetika ny mpanamboatra tsirairay dia misy iray na roa amin'ny endriny manokana ary miampy ireo endrika ankapobeny izay tsy maimaim-poana. Ao anatin'ity karazana kilasy faharoa ity dia miavaka i Epub, izay ny endrika ebook maimaim-poana, ny txt, ny pdf na ny antontan-taratasy. Mikasika ny karazana endrika voalohany, ny endrika fananana ampidirin'ny mpanamboatra lehibe dia miankina amin'ny orinasa matetika izany, saingy avy amin'ny endrika Epub novain'izy ireo avokoa. Ny maharatsy an'izany rehetra izany dia raha mividy ebook amin'ny fivarotam-boky isika, raha tsy manana endrika malalaka, tsy ho afaka hamaky izany amin'ny mpamaky avy amin'ny fivarotam-boky hafa.
Ireo lesoka ireo dia mazàna hita miharihary amin'ny raharaha Amazon, izay mpamaky, Kindle, mamaky ebook vitsivitsy fotsiny izy ireo, izay, endrika efatra no an'ny Amazon. Ireo endrika ireo dia ny Kindle Format 7, ny Kindle Format 8, ny endrika mobi ary ny endrika prc. Ireo endrika ireo dia fanavaozana toy ny mobi na Kindle Format 7 na maka ny fenitra, ny endrika Epub ho fototry ny famoronana ireo endrika ireo. Ohatra tsara amin'ity farany dia ny Kindle Format 8. Fa andao jerena akaiky ireo endrika ireo.
1 Ny Kindle Format 7 na fantatra koa amin'ny hoe AZW
2 Ny Kindle Format 8 na AZW3
3 Endrika Kindle Mobi
5 Ireo endrika ebook izay vakin'ny Kindle Fire
Ny Kindle Format 7 na fantatra koa amin'ny hoe AZW
Ity endrika Kindle ity dia kinova fanatsarana ny endrika mobi. Tamin'ny 2008, Amazon dia nividy ny orinasa Mobipocket ary niaraka tamin'izy ireo ny patanty sy ny vokatra rehetra an'ny orinasa. Tsy dia be loatra izany fa nanana izay nankasitrahan'ny Amazon indrindra izy ireo, ny patanty ho an'ny endrika ebook, indrindra ny endrika mobi. ny mobi endrika manandrana manaraka ny lalàna OpenBook, endrika izay mifototra amin'ny fenitry ny tranokala xml. Taorian'ny fividianana dia naka ny endrika i Amazon, ny fanajana ny lalàna sy ny fiasa rehetra ao aminy, ary nampahafantatra ny DRM azy manokana, rindrambaiko iray izay mametra ny fampiasana ny ebook amin'ny kaonty na fitaovana sasany, ho an'ny fivarotana ny ebook, izao no fomba Kindle Format dia teraka 7 na AZW.
Miaraka amin'ny fandehan'ny fotoana, nivoatra ny Amazon eReaders ary niaraka tamin'izy ireo ny rindrambaiko sy ny endrika azon'izy ireo nilalao, izany no nahitanay ny endrika Kindle 8.
Ny Kindle Format 8 na AZW3
Izy io dia fivoaran'ny endrika Kindle Format 7, tsy nahitana ny endrika mobi miampy sosona misy drm intsony fa zavatra hafa. Ny Kindle Format 8 na AZW3 dia ebook manaraka ny fenitra EPUB3, izay ampidirin'izy ireo drm ary ampiarahina amina fisie ao amin'ny format AZW na Kindle Format 7 ihany koa mba hifanaraka amin'ireo fitaovana mamaky ilay endrika taloha. Rehefa noforonina ny endrika mobi sy ny endrika Kindle Format 7 dia mbola nanjary somary nanahirana ihany ny fanefana ny endrika epub, ka tsy sahy nanao an'io endrika io i Amazon mandra-pahatongan'ny AZW3. AZW3 dia tsy mampiasa feno ny herin'ny HTML5 satria misy ny tag vaovao tsy manohana azy ireo ary ny sasany izay efa lany andro dia manohy mampiasa azy ireo. Ho fanampin'izay, ny fenitra CSS3 dia tsy manaraka tanteraka, ny singa sasany toy ny sosona fototra miorina dia tsy mifanaraka amin'ny CSS3.
Endrika Kindle Mobi
Miaraka amin'ireo endrika Kindle ireo dia manohana ny endrika mobi ihany koa ny Kindle eReaders, na dia maneho ny ampahany tranainy indrindra amin'ny Amazon aza izy io, dia mitohy ny fisian'ity endrika ity ary mbola manohana azy hatrany i Amazon ao amin'ireo eReaders. Mazava ho azy, ny endrika tsy misy DRM irery, araka ny voafaritry ny Amazon. Ny Mobi tsy misy DRM dia manana fiarovana maromaro hatramin'ny nananganana ny orinasa Mobipocket nisolo tena ny endrika ebook faharoa noforonin'izy ireo.
Te hahafantatra ny faharetan'ny famakiana boky ve ianao? Milaza aminao ity tranonkala ity
Ny voalohany amin'ireo endrika izay azon'i Amazon tamin'ny fividianana ny orinasa ary nampitainy tamin'ny mpamaky azy dia ny endrika prc. Ny prc dia endrika tsotra mitovy amin'ny endrika mobi saingy tsy misy ny fiarovana azy, amin'izay ny mpamaky rehetra mamaky ny endrika mobi dia mazàna mamaky ny endrika prc. Tena tsy fahita firy ny mahita ebook amin'ity endrika ity, farafaharatsiny izay farany indrindra, fa satria tsy misy ny fiovan'ny rafitra katalaogin'ny Kindle dia ilaina ny mitazona an'io endrika taloha io amin'ny mpamaky, farafaharatsiny mba hamakiana ebook taloha.
Ho fanampin'ireo endriny, Kindle koa dia manohana endrika hafa izay tsy Amazon ny tompony na manana fahazoan-dàlana GPL. Anisan'ireo endrika ireo, misongadina ny PDF, endrika fisie izay tsy format ebook ho azy, fa karazana rakitra mety tsara amin'ny famakiana azy. Ny Pdf dia an'ny Adobe ary ny fanafohezana azy, Portable Document Format, dia manondro ny endri-javatra tsara indrindra, ny fivezivezena. Na dia i Adobe aza no mpamolavola an'ity endrika ity, tamin'ny 2008 dia namoaka azy io ary nanjary ampahany tamin'ny International Organization for Standardization, izay nanjary endrika misokatra. Izany dia nahatonga ny endrika pdf sy ny fahaizany mitondra azy miasa tsara amin'ny Amazon eReaders, na izany aza ny haben'ny efijery, latsaky ny 9,7 ", ka manasarotra ny famakiana olona sasany. Tamin'ny voalohany dia nanandrana namaha izany tamin'ny famoronana Kindle lehibe kokoa, ilay Kindle DX malaza, saingy vetivety dia nilaozana ity eReader ity nitady fomba hafa toa ny fanovana ny antontan-taratasy pdf ho endrika Epub na fanatsarana fotsiny ilay pdf ho amin'ny haben'ny efijery.
Ilay Kindle koa izy io dia afaka manohana endrika taloha, toy ny txt na html. Ny voalohany amin'izy ireo, ny txt no endrika tsotra indrindra misy amin'ny tontolon'ny solosaina. Betsaka amintsika no niara-niasa tamin'ity endrika ity, io ilay endrika novokarin'i Windows Notepad, fa ny famakiana antontan-taratasy ho boky amin'ity endrika ity dia asa sarotra satria io endrika io dia tsy manaiky ny safidy fanovana ifotony na ny firafitry ny lahatsoratra.
Ny mpamaky fandrehitra farany dia nampiditra ny famakiana ny endrika doc sy docxIreo endrika ireo dia novokarin'i Microsoft Word ary tena manolo ireo ebooks noforonina tamin'ny txt. Tsy toy ny txt, ny antontan-taratasy doc sy docx mamela antsika hanana boky voahitsy sy efa voaova ho famakiana. Saingy ireo endrika roa ireo dia tsy natao ho ebooks ihany koa, noho izany ny fampiasana azy dia misy drawbacks vitsivitsy amin'ny mpamaky rehetra. Ny iray amin'ireo drawbacks dia amin'ny haben'ny rakitra. Raha mijery ny haben'ny ebooks misy ny endrika AZW sy AZW3 isika, dia tsy dia lehibe loatra izany, mazàna dia mihoatra ny megabytes roa izany matetika, na izany aza, ny ebook amin'ny endrika doc na docx dia mety mitaky in-3 bebe kokoa, ka sarotra kokoa tantano sy ampiasain'ny Kindle.
Ny eReaders an'ny ranomainty elektronika, izany hoe ny Kindle, dia afaka mamorona sary ihany koa, na dia tsy miloko aza izy ireo, raha azonao ny fankasitrahana sy ny fiovan'ny tonony. Ity amin'ny Kindle farany, izay manana ny haitao fampisehoana ranomainty farany ary koa misy vahaolana avo lenta, dia ankasitrahana tokoa. Raha ny sary tadiavintsika dia ny sary eo amin'ny Kindle Fire, ankoatr'izay voalaza etsy ambony dia azontsika atao ny mahita ireo sary miloko. Ny endrika sary dia maro sy isan-karazany, saingy tsy misy Kindle afaka mamaky endrika rehetra. Ny zavatra tsara momba an'io dia ny fitandremana Amazon mba hahafahan'ny mpamakiny mamaky ireo endrika sary malaza indrindra. Noho izany, ny endrika sary hanohanany dia jpg, png, bmp, gif.
Ireo endrika ebook izay vakin'ny Kindle Fire
ny Firele azo raisina ho ny kilasy mpamaky Kindle faharoa na dia tsy misy miantso azy ireo ho toy izany aza. Ny toetoetran'ny fitaovan'ny fianakaviana Kindle Fire dia ny takelaka iray, na dia mifantoka tanteraka amin'ny tontolon'ny famakiana aza ny rindrambaiko, hany ka na ny haben'ny efijery misy aza dia nofidina hanome ny mpamaky fampiononana lehibe kokoa rehefa mamaky.
Ny Kindle Fire dia mitondra ao am-pony ny kinova Android namboarin'i Amazon mihitsy, ny rafitra fandidiana toy izany dia antsoina hoe FireOS. Amin'ny ankapobeny, azo lazaina fa ny takelaka sy ny fananana Android, ny Kindle Fire dia afaka manohana ny endrika rehetra, na izany aza Amazon amin'ny maodely voalohany dia afaka mametraka app avy amin'ny Play Store mba hahafahantsika mamaky fotsiny ireo endrika milaza izahay Amazon raha tsy hoe manelingelina ny rindrambaiko Amazon izahay.
Tamin'ny voalohany, rehefa mividy ny Kindle Fire isika ary mampirehitra azy dia afaka mamaky ireo endrika ebook noresahintsika tetsy ambony, fa afaka mamaky endrika haino aman-jery hafa koa isika na dia tsy misy ifandraisany amin'ny ebook aza izy ireo, dia ho an'ny fanampiana lehibe ho fantatra rehefa mampiasa ebooks interactive.
Tao anatin'izay volana lasa izay, Amazon dia nanampy ny serivisy Audible ho an'ny ekosistema. Izany dia nahatonga ireo fitaovana izay manana efijery izay tsy e-ink afaka milalao endrika audio, indrindra ireo endrik'ilay fampiharana azo henoina, izay aax.
Ny endrika heno dia iray amin'ireo endrika vaovao natolotr'i Amazon amin'ny fitaovanao misy écran lcd na efijery miloko. Ireo fitaovana ireo dia matanjaka kokoa noho ny eReaders, izay midika fa afaka manohana endrika endrika betsaka kokoa izy ireo, tsy ireo fantatra amin'ny ebook ihany fa ny endrika hafa izay manome antsika fidirana amin'ny video, audio ary fitetezana tranonkala feno kokoa.
Anisan'ireo endrika horonantsary, miavaka ny mkv sy mp4, na dia mamaky 3gp sy vp8 (webm) koa aza izy ireo. Ao anatin'ny endrika audio, ankoatry ny endrika aax, izy ireo koa dia afaka milalao ny rakitra mp3, ny rakitra OGG, endrika audio maimaimpoana izay mety hitovy amin'ny mp3 sy ny rakitra mahazatra miaraka amin'ny extension WAV.
Araka ny efa nolazainay teo aloha, azontsika atao ny manova ny rindrambaiko an'ny Kindle Fire, na amin'ny fampidirana fampiharana amin'ny apk na amin'ny fanapahana ny takelaka. Amin'ny tranga faharoa dia tsy tompon'andraikitra amin'ny antoka i Amazon, noho izany tsy ampirisihina hanao izany mba hamakiana ebook amin'ny endrika epub, fa amin'ny tranga voalohany dia azo atao izany ary hahafahantsika manampy endrika ebook vaovao toy ny endrika Epub. Hankatoavin'ny Kindle Fire antsika izany raha mametraka fampiharana toa ny Aldiko na FbReader isika. Ireo rindranasa ireo dia hita ao amin'ny magazay Google, amin'ny fivarotana Amazon ary na eo amin'ny tranonkalany aza, noho izany ny fahazoana tsotra dia mora ary ny fametrahana mora atao. Raha vantany vao hita ny fampiharana dia tahirintsika amin'ny takelaka izany ary asio marika ny safidy "hametraka amin'ny loharanom-baovao tsy fantatra" izay hamela antsika hametraka izay fampiharana tadiavintsika.
Ireo dia eo ho eo ny Fampisehoana Kindle manohana ny Amazon eReaders ary lazaiko mafy satria tsy niditra tamin'ny antsipirihany ara-teknika izahay izay hampisafotofoto ny mpamaky antonony izay maniry hahalala raha azo vakiana na tsia ireo ebooks efa ananany amin'ny Kindle na tsia.
Manantena izahay fa miaraka amin'ity fampahalalana rehetra ity dia efa mazava kokoa ianao inona ny endrika vakin'ny Kindle na dia manana fanontaniana aza ianao dia avelao izahay hanome hevitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » orinasa » Amazon Kindle » Fampitaovana Kindle, inona ireo eBook azonao sokafana amin'ny mpamaky Amazon?
l0ck0 dia hoy izy:
Tsy misy ePub ??
Tsy misy mpamaky eReader
Valiny amin'ny l0ck0
hahaha, mamintina lahatsoratra tsy manana mpifanandrina aminao
Manana afo mirehitra aho ary tsia. Raha mamaky dia tsy resy lahatra aho. Matotra fa karazana hafahafa izy io. Afaka mandany ora maro amin'ny filalaovana ny NBA sy ny fijerena horonan-tsary ary ny fivezivezena kely aho fa ny famakiana boky izany ary manelingelina ahy be ilay famirapiratana. Tsy haiko ny mamaky raha manelingelina ahy izany ary ho an'ny ambiny tsy dia be loatra nefa dia toy izany. Ho an'ny famakiana dia aleoko ny ranomainty elektronika avy amin'ny Paperwhite.
George Charles dia hoy izy:
Tena tsy mamaky ePub ve ianao?
Te hividy ilay Kindle Paperwhite aho satria novakiako fa mitondra habaka 4GB izao. hahafahanao mametraka ebook bebe kokoa. Nisy olom-pantatro nilaza tamiko fa afaka, fa tiako ho misy miteny amiko raha azo atao ny mamaky ny ePubs amin'ny Paperwhite.
Valiny tamin'i Jorge Carlos
Araka ny nolazain'i Victorio tamin'ny programa Caliber, afaka mandeha tanteraka amin'ny endrika iray hafa ianao ao anatin'ny iray minitra, noho izany raha liana amin'ny Kindle ianao, dia tsy sakana ny tsy famakian'izy ireo ny ePub. Manana Paperwhite aho ary ny boky rehetra alaiko dia ao amin'ny ePub ary tsy mbola nanana olana afaka namaky tao amin'ny eReader aho satria navadiko izany alohan'ny namindrana azy ireo tany AZW3
Fandresena dia hoy izy:
Ny Caliber dia nanova sy nanitsy ny endrika boky nomerika rehetra, manana takelaka iray mamaky epub sy kindle mamaky AZW3 aho, miaraka amin'ity programa ity dia mandeha amina endrika iray mankany amin'ny iray hafa tsy misy olana aho.
Valiny tamin'i Victorio
Ma Josep dia hoy izy:
Salama, nidina fotsiny ny kaliberako ary tsy afaka manova ny endrika ho AZW3 aho noho ny DRM
Azafady, inona no azoko atao?
Mamaly an'i Maosep
Pedro Jose dia hoy izy:
Ny fampiasana ny JailBreak sy ny fametrahana CoolReader dia azonao atao ny mamaky endrika tianao rehetra
Valiny tamin'i Pedro Jose
Daniela sy Pedro Jose, misaotra betsaka anao noho ny hevitrao, mieritreritra aho fa androany dia azoko ny Paperwhite, izay mifikitra amin'ireo an'ny Game of Thrones aho ary avy eo nandeha tany amin'ny Dune saga, novakiako teo amin'ny ipad fa Namidiko izy io mba hanangonana sy hividianana solosaina finday, noho izany dia ho reraka aho hamaky avy eo am-pofoana.
Pedro Jose, azoko atao ve ny manamboatra ny JB miaraka amin'ny kinova farany vita amin'ny taratasy fotsy? misy torohevitra momba izany?
Misaotra tamin'ny hevitrao
Zorak dia hoy izy:
Nanana taratasy fotsy aho nandritra ny 2 taona ary misy ny mahatsara sy maharatsy azy. Amin'ny maha mpamaky azy dia mety amin'ny famakiana. Tena vita tsara ary tsara ny fahatsapana ankapobeny. Voalaza fa, misy zavatra izay tsy mandeha tsara. Ohatra, ny navigateur fanandramana maharitra maharitra taona dia manana kalitao maloto. Tsy azo fidiana ny mpandika teny, raha tianao tsara ny mpandika tenin'i Bing, raha tsy izany dia mila miaritra amin'izany ianao. Ankoatr'izay, tsy tafiditra ao anatin'ireo fiteny peninsular toa ny Catalan, Basque, sns.
Valiny tamin'i Zorak
Jorge Carlos, Fikarohan'i Google, tsotra be izy io
Efa nisalasala aho teo anelanelan'ny paperwhite mandrehitra sy ny Samsung Note 8.
Ny tombony azo amin'ny Note dia ny fahaizany bebe kokoa ary afaka manao zavatra hafa. Ny fanontaniana dia ny fomba famakiany sy ny fomba famakiny.
Manana fanontaniana aho… Manana boky efa nakarina ao amin'ny amazon aho, misy sary eo anelanelan'ny fehintsoratra (mampiasa teny) ary ny marina dia nanana fahasahiranana lehibe aho mba hitazomana azy ireo sy amin'ny toerany araka ny tokony ho izy. Toy izany koa, rehefa nampakatra azy tany amin'ny amazon aho, ka nanapa-kevitra ny hanala ireo sary tao amin'ny bokiko, izay niteraka ahiahy be tamiko. Afaka manampy ahy hamaha izany ve ianao? MISAOTRA
Vao nanomboka tamin'ny Kindle aho ary ireo boky napetrako dia tsy miseho na aiza na aiza. Lasa adala aho !!!!!!
Valiny tamin'i Josefa
Salama, afaka nahazo Kindle gen faha-4 tanana faharoa aho. Raha jerena izany dia tiako ho fantatra raha tena mifanitsy aoriana ny endrika Kindle azw3.
Mitranga ny fampitaovana azw fa tsy manohana afa-tsy ny format azw ary tsy haiko raha hiasa ao ny format azw3. Misaotra anao
Salama, nakariko ny fandrehitra ho an'ny pc ary ny andro voalohany novakiako ary nahagaga ilay izy nefa avy eo tsy te-hamantatra izany, dia mijanona eo hatrany hatrany. Inona ny malaza? Izay azoko atao. manana windows 10 aho ary manana kaleta 34 bit sy 64 bit. mamaky epub koa.